IChaCha Yethula Uhlelo Lokusebenzisana Komphakathi | Martech Zone
IChaCha Yethula Uhlelo Lokusebenzisana Komphakathi
NgoLwesithathu, ngoMashi 28, 2012 NgoLwesibili, ngo-Mashi 27, i-2012 Douglas Karr
Kunezinhlelo ezimbalwa zokubambisana engingaphansi kwazo kepha ngikhetha kakhulu ngalokho engikukhuthazayo kubhulogi lethu nangokomphakathi. Kunenkinga ethokozisayo uma kukhulunywa ngokuthengisa okuhambisanayo, noma kunjalo. Iningi lamathuba wokusebenzisana asuselwa ku-klout yakho noma kwinani labalandeli onabo… hhayi ngokususelwa ethonyeni lakho nasekhonweni lokuguqula amathemba abe amakhasimende.
Izinhlelo zokusebenzisana zigcwele yonke indawo kepha uChaCha usanda kwethula okuthile kwesilwane esehlukile ChaCha Ababambisene. Ngokungafani nezinhlelo ezihambisanayo ezihambisa abantu ezikhangisweni zomkhangisi, uChaCha usebenzisa uhlelo lokusebenzisana ukushayela abantu okufanele bashiwo okuqukethwe kwabo ngokwenhlalo… bese ubakhokhela ngokususelwa kuzithameli ezichofoza lapho. Kuyinto encane kakhulu phakathi kokuxhumana nomphakathi nokukhokha ngakunye. Inhloso, yiqiniso, ukuhambisa ithrafikhi isiza - okuguqula izethameli zibe amadola wokukhangisa nawokuxhasa.
Ngibhalisele lolu hlelo ngemizuzu embalwa ngathola umkhankaso owusizo ongathunyelwa kubalandeli bami: Ungaphuthelwa Kanjani ku-imeyili Yebhizinisi. Njenge-blogger nomfana wezokuxhumana, ngihlala ngifuna okuqukethwe engingabelana ngakho okuzosiza izilaleli zami. Lokhu akusebenzi… ngithola kokubili okuqukethwe okuwusizo futhi Ngikhokhelwa ngokwabelana ngakho.
UChaCha uvimbele impela ubuchule obuthile bamuva… kusuka kuzicelo zeselula futhi Iris, ukufinyelela imibuzo eyizigidigidi ezi-2 ephendulwayo kanye nokufinyelela inzuzo - ngijabule ngendlela emangalisayo ngabasebenzi babo. Basebenza kanzima futhi bahlala bephusha imvilophu. Ama-Kudos aya eScott kanye nenkampani!
Tags: lobulunguuhlelo lokubambisanachachaUkukhangisa Okuqukethwe
Ukubonakala nemivuzo ngokuthonya
IScoutmob: Iziphesheli Zendawo Yesikhathi Sangempela
Mar 29, 2012 ku-7: 43 AM
Ngizobheka lokhu. Ngaso sonke isikhathi ufuna umkhiqizo wokusebenzisana wekhwalithi. Ngiyabonga. Ngokufudumele, uSusan
Mar 31, 2012 ku-5: 25 PM
Okuthunyelwe okuhle ngesikhathi esifanele uDouglas. Kubanjwe umoya walokhu ngokusakazwa kwe-G +. Izabelo zomphakathi ziba yimethrikhi efanelekile futhi enenani elikhulu • lolu hlobo lwamamodeli omphakathi luzophumelela.
Ngo-Apr 1, i-2012 ku-11: i-36 PM
Njengamanje ngibambisene, futhi uhlelo oluhle impela. Ngenze ama- $ 60 ngehora lapho esinye sezixhumanisi zami sithola ukuthandwa ku-reddit. (Lokho akuvamile neze).
Uma ufuna ukuba inxusa futhi wenze isenzo sakho esihle sosuku, sicela usebenzise isixhumanisi sami sokudlulisela: http://affiliates.chacha.com/signup/CD10667
Ngiyabonga! ChaCha Phakade!
Ngo-Apr 5, i-2012 ku-6: i-46 PM
Ngilokhu ngizama ukubhalisa, kepha uChaCha unginikeza leli phutha elilandelayo, noma ngabe sengivele ngilihlolile ibhokisi elithi “uyavumelana nemigomo”:
“IPHUTHA: Kufanele ubheke ibhokisi elithi“ Vumelana Nemigomo ”ngaphambi kokuba ube Inhlangano.”
Ngo-Apr 5, i-2012 ku-7: i-02 PM
Ngicabanga ukuthi lokho kungaba inkinga yesiphequluli, uPaula. Yisiphi isiphequluli osisebenzisayo futhi ngizodlulisela lokhu eqenjini lapho.